Global Voices teny Malagasy » Sisintany Iraisan’i Krimea Sy Okraina: Notapahan’ny Manampahefana Rosiana Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Sisintany Iraisan'i Krimea Sy Okraina: Notapahan'ny Manampahefana Rosiana Ny Aterineto
Voadika ny 12 Aogositra 2016 3:35 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Fanampenam-bava, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Sary nataon'i Kevin Rothrock.
Notapahan'ny manampahefana Rosiana ny fahafahana mahazo aterineto ao Krimea avaratra, akaikin'ny sisintany misy ny tanànan'i Armyansk, toerana izany lazain'i Maosko fa efa nampitandremany momba ny fisian'ny fitsofohan'ireo mpitsikilo Okrainiana mitam-piadiana, araka ny nambaran'i Olga Kovitidi, solontenan'i Krimea ao amin'ny antenimieran-doholona Rosiana sady mpikambana ao amin'ny kaomitin'ny Filankevitry ny Federasiona momba ny fiarovam-pirenana. Notenenin'i  Kovitidi tamin'ny Dozhd, tambajotram-pahitalavitra tsy miankina, fa notapahana ny fahafahana miditra aterineto ao amin'ilay faritra mba hanampiana ny polisy amin'ny ezaka ataony hisamborana ireo “mpisompatra” lazaina fa nitsofoka an-tsokosoko avy any amin'ny tanibe Okraina.
” ‘Noho ny antony fiarovana’ no nanapahana ny aterineto”, hoy i Kovitidi nanazava. “Natao io mba hahazoana antoka fa ireo hery manokana sasany… mba tsy hisian'ny mety ho fitsofohana an-tsokosoko… Noho ny resaka fiarovana, nilaina noraisina ireny fepetra ireny, ary takatry ny olona ny antony.”
Vao tany amin'ny 8 Aogositra, andro roa talohan'ny niampangan'ireo manampahefana Rosiana an'i Kiev ho mikononkonona fampidirana an-tsokosoko ireo “mpisompatra” mitam-piadiana, nisy tatitra  mikasika fisiana fahatapahana aterineto nidadasika be nanerana ny avaratr'i Krimea, indrindra fa nanaraka ny sisintany iraisany amin'i Okraina. Araka ny lazain'ny Sampandraharaha Federaly misahana Fiarovana ao Rosia, ny voalohany tamin'ireo fifandonana tamin'ireo olon'ny fitsikilovana avy any Okraina dia nitranga ny alin'ny 7 Aogositra, tany ivelan'i Armyansk, tanàna iray ao amin'ny sisintany, toerana voalaza fa nitsaharan'ny fiasàn'ny aterineto ny andro taorian'izay, narahan'ny fanesorana ny fakàna vola tamin'ireo DAB tao an-toerana.
Ny 9 Aogositra, namaly ireo tatitra momba ny fahatapatapahan'ny fidirana aterineto tany amin'ireo faritra manakaiky ny sisintany iraisana amin'i Krimea ny “Krymtelekom”, tamin'ny fanozezana tsiny  ny asa fikarakarana mahazatra ho antony nahatonga ireo fahatapahana ireo. Tao anaty fanambaràna iray tamin'ny gazety, nilaza ilay orinasa fa efa niomana ny hamerina amin'ny laoniny ny fidirana tranonkala ny 10 Aogositra, nefa mbola mitohy ihany ireo tatitra momba ny fahatapahana.
Tsy mazava loatra ny tena fomba ataon'ny manampahefana Rosiana hanapahana ny fidirana aterineto ao Armyansk sy ny faritra manodidina azy, na ny hoe tafiditra sa tsia amin'ilay fanapahankevitra ny Krymtelekom sy ireo orinasa hafa mpikirakira fifandraisandavitra, na mbola ny governemanta no manapaka amin'ny fomba mavitrika ny aterineto ao amin'io faritra io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/12/86554/
 tamin'ny fanozezana tsiny: http://www.sobytiya.info/news/16/65249